Pep Guardiola Oo BEENAALE Ku Tilmaamay Yaya Toure? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Pep Guardiola Oo BEENAALE Ku Tilmaamay Yaya Toure?
(10-6-2018) Dhawaan ayay ahayd markii uu Yaya Toure waraysi aad xaasaasi u ah siiyay wargayska France Football isla markaana uu Guardiola ku tilmaamay tababare cunsurinimo kula dhaqma ciyaartoyda Afrikaanka ah, wuxuuna Toure ka sheekeeyay sababta uu eedayntan ugu soo jeediyay macalinkiisii kooxaha Barcelona iyo Man City ee Guardiola.
Saxaafada aduunka ayaa si wayn uga faalootay hadalkii uu Toure ku duray Guardiola ee uu eedaynta culus ugu soo jeediyay isaga oo waliba xidiga ree Ivory Coast balan ku qaaday in uu hadiyad Guardiola siin doono maalinta uu shan ciyaartoy oo Afrikaan ah shaxdiisa ku soo wada xusho.
Guardiola ayaa sidoo kale meesha ka saaray in noloshiisa uu markale tababare u noqon doono Barcelona, wuxuuna sheegay in marka uu joojiyo shaqada tababaranimo uu ciyaari doono Golf-ka. Guardiola ayaa sidoo kale ka hadlay calaamada hurdiga ah ee siyaasada Catalonia ee uu ganaaxa kula kulmay xili ciyaareedkii dhamaaday ee Premier league.
Haddaba Guardiola ayaa markii ugu horaysay si xoogan uga jawaabay eedaynta uu Yaya Toure kala kulmay wuxuuna been cad ku tilmaamay eedaynta uu Toure u soo jeediyay kadib markii uu waraysi siiyay TV3.
Guardiola oo u jawaabaya isla markaana iska difaacaya eedayntii cuslayd ee uga timid Yaya Toure ayaa luuqaad xoogan ku sheegay: ” Waa been isaguna wuu ogyahay. Waxaanu wada joognay laba sanadood, waana hadda marka uu sheegayaa, isagu waligay si fool-ka-fool ah aniga iigumuu sheegin”.
Dhinaca kale Guardiola ayaa wax laga waydiiyay haddii uu mar uun noloshiisa dib ugu soo laaban doono Barcelona si uu tabbaare ugu noqdo wuxuuna yidhi: “Maya, anigu tababare ayaan ahay (ma ihi madax wayne), waxaanan ku fiicanahay waxa aan ka shaqeeyo, wax walba ma noqon kartid. Marka aan joojiyo tababarida, waxaad arki doontaa aniga oo ciyaaraya Golf”.
“Ka tababaraha Barcelona ahaan wuu soo dhamaaday, sababtoo ah anigu sidii lama mid ihi iyaguna si la mid ah iima arkaan” ayuu Guardiola hadalkiisa sii raaciyay isaga oo muujinaya in aanu markale noloshiisa qaban doonin shaqada tababaranimo ee Barcelona.
Guardiola ayaa xili ciyaareedkii dhamaaday ciwaanada saxaafada England iyo Spain ku qabsaday calaamada siyaasadeed ee Catalonia ee uu jeebka sare ku soo xidhan jiray waxaana wax laga waydiiyay orinta heesta qaranka Spain ee jamaahiirta Catalonia.
Guardiola oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Aniga wax sax ah iilama muuqato in lagu heeso heesta qaranka Spain, laakiin waxaan filayaa in wax aan micno lahayn tahay in shaadhka laga saaray calaamada hurdiga ah, sababtoo ah ma aha calaamad siyaasadeed, kaliya waxay dalbanaysaa xoriyada dadka 30 ka sano xabsiga loogu xukumay in ay gaadhiga soo koreen”.
Guardiola oo siyaasada cakiran ee Catalonia ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Tani waa waxa dhibta ugu badan leh marka aad aragto dadka oo xabsiga ku jira ama la tarxiilayo, ma jiro wax caadi ku soo noqonayaa ilaa inta taas la xalinayo”.